Ndeipi nzira yakanaka yekusika backlinks ye SEO?
Kugadzira backlinks ye SEO kunoreva kuvaka zvibvumirano izvo zvisingangotori zvinyorwa zvakawanda zvehupenyu kune webhusaiti yako kana bhulogi asi kusimbisa simba rako repaji, chiremera chemasimba, uye PageRank panguva yakareba. Pakupedzisira, kugadzira backlinks ye SEO inomirira kutya nzvimbo yako kusvika kumusoro kwerongwa rweSERPs. Asi chinhu ichocho hachisi kuresekodzero dzose dzakasikwa zvakaenzana - ndicho chikonzero vazhinji vese webmasters webmasters uye vashandi vebhizimusi vekutsvaga vari kungoisa pfungwa yavo pachigadziro chekuvaka zvakanyanya pane huwandu hwavo, panzvimbo yehutano. Kunyange zvakadaro, vachiita nenzira iyo vangangodaro vanozviwanira pangozi yakasimba uye kazhinji isinganzwisisiki yekurangwa, panzvimbo yekubatsirwa neicho chaiicho chinowedzera kuwedzerwa muzvikwereti.
Dzivisa zvinotevera, pakusimbisa backlinks ye SEO:
Websites kana ma blogs ane zvinyorwa zvinyoro zvinyorwa, kana izvo zvinoshaikwa zvakasiyana uye zvinyorwa zvepakutanga izvo zvinounza kukosha kwakakodzera kumushandisi.
Backlinks dzakavanzwa mukati peji yehuwandu, kuitira kuti zvioneke sezviri kuoneka kune injini yekutsvaga (semuenzaniso, uchishandisa 0 font size).
Kunyengedza nokunyengera, kunyengera, kana kuvhara kumashure asingabatsiri chete kweSeO zvinangwa, panzvimbo pokuvandudza ruzivo rwevashandi uye kunyatsorondedzerwa nekutsvaga injini.
Kuumba backlinks ye SEO, funga nezvemashure ematanisi ekunze anotevera:
Nyika yenyika yevashanyi chaiyo (zvisinei, inoraramire vanhu vanoongorora).
Nzira dzakawanda dzekushandiswa kwevashandi (somuenzaniso, kutengesa kwemazuva, zuva rega rega kuburikidza nemushandisi anoshanyira, kuonekwa peji yepamusoro, nezvimwewo).
Mutengo chaiwo wekushanyira, unobuda zvakananga kubva kuhupenyu hwekutsvaga motokari.
Mashoko akashandiswa akakwirira, uye keyword kukwikwidzana kubva kunjini huru dzekutsvaga seGoogle pachako.
Kuyeuka pfungwa idzi dzataurwa pamusoro apa, usakanganwa kuva nechokwadi chokuti zvinhu zvose zviri munzvimbo uye shure kwako kuzokushandira zvakanaka, kunyanya pamusoro pezvaunotarirwa webhuta , uye peji rako rine simba pane imwe nguva. Ndinoreva kuti iyi ndiyo iyo web analytics inotamba, zvechokwadi, kana iwe uchida kusvika kubudirira kwekuita zvinowanikwa kune backlink imwe neimwe yakangogadzirwa. Saka, apa pane zvakakosha kuti zviongorore pakusikwa backlinks ye SEO:
Nhamba yose ye backlinks inotaridzirwa kunzvimbo yako yepawebsite kana blog.
nzvimbo huru yekuendesa kune chinangwa chekutsvaga web traffic.
Avhareji yehupenyu hunoshanyira kushandiswa hunoshandiswa kubva kune rimwe rega rega unenge uri muhutano hwako.
Ndizvo zvikamu zvikamu uye zvikamu zvepaji peji rako zvakanyanya kushanyirwa nevashandisi.
Nzira iyo, iva nechokwadi chekuongorora kaviri pane imwe nhengo yakasiyana. Kana ini, pandakaumba backlinks yeSEO, ndakashandisa zvishomanana-kushandiswa kumashure ekuongorora checker, zvakadai saMo Open Site Explorer, Semalt Analyzer, Majestic SEO, uye Ahrefs. Vakawanda vavo vane hutano hwakaratidzwa mukukuratidza nzvimbo dzisina simba dzinoda pakarepo nokukurumidza-kugadzirisa, somuenzaniso, kubvisa kushungurudza kana kusvibiswa zvakasvibiswa kwechinyorwa pfupi yekare chinyorwa zvisati zvapa maitiro asina kunaka kumahofisi ewebsite kana blog. Mushure mezvose, zvinongova kwauri chete kuti usarudze kuti ndeipi iyo inofanirwa kuongorora inoshandiswa kuInternet. Ingoita kuti uve nechokwadi chekutarisa yako profile profile, uye kunyanya zvose backlink zvitsva yakasikwa, nguva dzose. Nenzira iyo, iwe uchakwanisa kuchengeta zvinhu zvose zviri munzvimbo uye unonzwa uchitsigirwa kune chero chero kurasikirwa kusingatarisirwi mumugwagwa kana kuti chaiyo peji yepamusoro Source .